फरार अभियुक्त वीस वर्ष पछि पक्राउ – ABC KHABAR
October 5, 2015 ABC Desk समाज
असोज १८, गोरखा
१९ बर्ष अघि एक महिलाको हत्या गरेर फरार रहेका धन बहादुर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लागेका गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय गोरखाले भदौ २९ गते पोखरावाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
गोरखा पांचखुवा देउराली गा.वि.स. वडा नं. ६ अमले घर भएका गुरुङविरुद्ध् ज्यान मार्ने तथा चोरीको अभियोग छ ।
उनले २०७२ असार २७ गते राती रनमाया राणाको होटल पसलमा निज रनमाया राणा समेतका ५ जना व्यक्तिहरुको खानामा लठ्याउने पदार्थ मिसाई खुवाई बेहोस बनाएका थिए । उनले वेहोस रनमाया राणाको सुनको रिङ, सुनको सिक्री र नगद साठी हजार मात्र चोरी गरी फरार भएको थियो ।
त्यस्तै गुरुङले २०५२असोज २७ गते सांझ सुकलक्ष्मी श्रेष्ठको घर होटलमा बास बस्ने वहानामा घरका सदस्यलाई मिठाइमा विष हालेर खुवाएका थिए । उनले श्रेष्ठ, ९ वर्षीय नातिनी पशुपति श्रेष्ठ र ७ वर्षीय सिता श्रेष्ठलाई बेहोस बनाई ३ तोला बराबरको सुनको गरगहनाहरु, नगद पैतालिस हजार लिएर फरार भएका थिए । वहोस सुकलक्ष्मीको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा संलग्न लालमाया पुनलाई प्रहरीले कास्की रामवजारवाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनैको वयानको आधारमा प्रहरीेले गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको गोरखा प्रहरीले जनाएको छ ।
मधेसी मोर्चा वार्ताप्रति लचक, चार सदस्यीय वार्ता टोली